Vovonàna GV : Tena lafatra ny andro voalohany ! · Global Voices teny Malagasy
Vovonàna GV : Tena lafatra ny andro voalohany !
Voadika ny 30 Jona 2008 0:30 GMT
Raha izay fahitanay azy dia tena lafatra ny andro voalohan'ny vovonàna 2008-n'ny Global Voices izay tanterahina any Bodàpestà, any Hôngria (mazava ho azy fa tsy arakay maso daholo izay antsipirihan'ny fikarakarana rehetra). Nanomboka tamin'ny teny fampidirana avy amin'i Ethan Zuckerman sy Rebecca MacKinnon izay namorona ny Global Voices, ny andro voalohany, izay nisaorany manokana ireo mpanohana mpamatsy ara-bola marobe [sponsors] sy ireo namana mpiara-dia amin'ny vovonàna Global Voices [GV Summit]. Fisaorana manokana no natolotra an'i Georgia Popplewell, Tale Jeneralin'ny GV sy mpitari-dalana amin'ny fahatanterahan'izao vovonàna izao. Azavain'i Rebecca [MacKinnon] ireo hevitra izay mivoy ny GV avy ambadika :
Avy amin'ny faritry ny fanaovan-gajety no nihaviako, Ethan kosa avy amin'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana [NGO, ONG], samy liana mikasika ny fantsona fampahalalam-baovao sy izay zotran'ny mason'izao tontolo izao izahay roa. Ny masoko dia nanatrika ny fitanjozoran'ireo fantsona fampahalalam-baovao amin'ny teny anglisy hifantoka betsaka amin'ny olom-bitsy sy amin'ny toerana sasany, ka “manadino” kosa feo sy faritry hafa. Nanao fikarohana maro mikasika izay mahaliana ireo fantsona fampahalalam-baovao i Ethan. Nodinihinay ny blaogôsfera [tontolon'ny mpiblaogy] ary dia fanirianay ny hanapariaka mikasika ireo olona manerana izao tontolo izao izay nanomboka nampiasa ny fi-blaogiana.
Manarakaraka izany fampidirana izany, ny lohahevitra 1: “Zotra mankany amin'ny fifanakalozana (ara-Aterineto) tsy misy fameperana,” izay nanomboka tamin'ny fandraisana fitenenanan'i Helmi Noman izay mpandrindra ny adihevitra. Jillian York sy Renata Avila kosa nampita mivantana [liveblog] ny fihaonana amin'ny alalan'ny fampiasana ny rafikajy CoveritLive. Sivana anivon'ny Aterineto, fanapahan-kevitra ny hamehy vava, sy lohahevitra hafa maro mifandray amin'izany any Egypta, sy Marôka, sy Belarosy, sy Japàna, ary Pakistana no nodinihina nandritra izany fehim-potoana izany, izay nandraisan'i Sami Ben Gharbia, sy Chris Salzberg, sy Andrei Abozau, sy Ethan Zuckerman, sy Awab Alvi, ary Alaa Abdel Fatah anajara fitenenana.
Juliana Rotich kosa no nampita mivantana [liveblog] ny lohahevitra faha-2. Mary Joyce no mpandrindra ny adihevitra; Ory Okolloh avy any Kenya, Wael Abbas avy any Egypta, Amine avy any Marôka, Oiwan Lam avy any Hong Kong, Au Wai “Alex” Pang avy any Singapôra, ary Hamid Tehrani avy any Iran no nifanakalo hevitra manodidina ny lohahevitra “Ny fijoroana vavolombelon'ny tsirairay sy ny fahalalahana ara-pitenenana eto amin'ny Aterineto.” Lohahevitra nodinihina mandritra izany fotoana izany ny fampisana ny rafi-kajy Twitter, ireo Proxy sy SMS mba hialana amin'ny sivana sy ny famehezam-bava apetraky ny sasany anivon'ny aterineto. Samy nitatitra ohatra avy any amin'ny firenena nipoirany ireo mpandray fitenenana tsirairay.
Jillian York no nampita mivantana [liveblog] ny lohahevitra faha-3, nampitondraina ny lohateny hoe “Miaina anivon'ny famehezam-bava.” Awab Alvi izay ao amin'ny Don't Block the Blog no mpandrindra ny adihevitra, i Helmi Noman, CJ Hinke, Andrew Heavens, Rezwan, Yazan Badran, ary John Kennedy indray no nandray misesy anjara fitenenana. Samy nanambara izay fiheviny ny hoe miaina anivon'ny famehezam-bava ny tsirairay, ary samihafa ny fomba fahitan'ny tsirairay izany.
Juliana Rotich no nampita mivantana [liveblog] ny lohahveitra faha-4, izay nanasàna olo-maro handray anjara fitenana manokana, isan'izany ny mpandrindra ny adihevitra i Ethan Zuckerman izay nivaky fa tsara vitana isika manana azy mandritra izao vovonàna izao satria tery dia tery ny fotoany nohon'ny hamaroan'ireo fanasana izay voarainy ! Roger Dingledine avy amin'ny Tor, sy Nart Villeneuve (Citizen Lab), sy Isaac Mao (Digital Nomads Project), sy Robert Guerra (Privaterra), ary Danny O'Brien (Electronic Frontier Foundation) no nifandimby samy nandray fitenenana. Danny O'Brien nizara manokana mikasika ireo fitaovana azo ampiasaina mba ihoarana ireo fameperana isan-karazany :
What criteria should you look for when choosing circumvention & anonymizing tools? This is important because some tools that you can use now may not be safe to use in future. Google may be good now, but as it continues to grow, will it remain so?
The features you want…
-You want a tool that is well funded.
Inona ireo sokajy ahafahana mifidy izay fitaovana mahomby ihoarana ireo fameperana mba ahafahan'ny mpiblaogy manoratra tsy misy fanahiana ny hanenjehana azy [misaron-tava] ? Tena lohahevitra manana ny toerany tokoaizany satria amin'ireo fitaovana izay ampiasaintsioka ankehitriny, angamba misy ireo izay tsy ho azo antoka intsony rahampitso ny fampiasana azy. Mety ihany angamba ny fampiasana ny vohikala Google androany, tsy mitsahatry ny mitombo hatrany anefa izy, ka moa ve mbola hitombona izany fampiasana azy izany rahampitso ?
Ireo sokajy no tadiavinareo …
– Fitaovana izay mangalahala ny famatsiana azy no tadiavinareo [avy aiza ny vola ampiasaina].
Marihin'i Juliana fa manoro-hevitra mba tsy ampiasana ireo vohikala sy rafi-kajy filam-bola [amidy] i O'Brien.
Ny lohahevitra faha-5 no namehy ny andro voalohany, i Rebecca Wanjiku no nanatanteraka ny fampitana mivantana [liveblog] ary i Xiao Qiang kosa no mpandrindra ny adihevitra. Ireo nandray ny fitenenana kosa dia i Clothilde Le Coz (RSF), sy Elijah Zarwan (HRW), sy Nasser Weddady (HAMSA), sy Stephanie Hankey (Tactical Tech), ary Antony Loewenstein (Amnesty International Australia's campaign Uncensor).
I Rebecca MacKinnon no nandray ny fitenenana ho famaranana ny fotoana, nizara momba ny sivana araky ny fomba fijery avy amin'ny lalàna, avy amin'ny pôlitika ary avy amin'ny prôgrama sosialy:
Without the social layer on top of the technical and legal solutions, a lot of these problems are going to be difficult to solve. I was really struck by stories about social demoralization and isolation that some bloggers feel.
Raha tsy ny lafika sosialy no lolohavin'ireo [ambony indrindra] lafika ara-teknika sy ara-dalàna, dia ho maro ireo olna izay sarotra ny hamaha azy. Tena nahatohina ahy mihitsy ny nandre ireo tantaran'ny fahakivian'ireo mpiblaogy izay mahatsiaro tena ho ankila-bao sy tokana an-tany.
Nampiany fa andraikitr'isika tsirairay no mandray andraikitra mba hiara-miasa mba ihoarana ny olan'ny fameperana sy sivana anivn'ny Aterineto sy mifantoka amin'izay zavatra azontsika atao, fa tsy variana amin'izay tsy azontsika atao. Ho fehiny, nambarany ho koa hoe ahoana no fomba ampiasan'ny sasany ny fameperana amin'ny foto-kevitra hafa. Ohatra izao ny fitoeran'ny famerana ny fahalalaham-pitenenana eo amin'ny lafiny ara-pitanjahana sy ny vetaveta any Japàna dia mety alain'ny fanjakana Shinoa ho ohatra mba hamoretana ireo mpivoy ny zon'olombelona sy hevitra samihafa tsy sitraky ny fitondrana [mpanohitra] any Shina.
Mbola maha-velom-panantenana koa ny Andro faharoa, miaraka amin'ny Rising Voices [Fanandratana ny feon'ireo izay tsy re], GV Lingua [dikateny GV, tafiditra ao ny Malagasy amin'ny alalan'ity vohikala ity], sy ny lohahevitra hafa koa.
Soratra miverina: Global Voices amin´ny teny malagasy » Vovonàna GV : Tanteraka koa ny andro faharoa !
[…] amin'ny fisoloam-bava sy fivoizana hoan'ny fahafaham-pitenena'ireo mpiblaogy ny Andro voalohan'ny vovonàna Global Voices, androany kosa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny raharaha […]
01 Jolay 2008, 15:21